Olee otú encode MP4 Files na-MP4 Encoder
Dị ka otu n'ime na nso nso kere video containers, MP4 itịbe na-akpa ukara video akpa kọwaa site MPEG-4 Standard. Nke a na-eme ka ọ kpọrọ ihe, si otú ikwe ka ọrụ ikpokọta dị iche iche multimedia iyi n'ime a n'ụlọnga video faịlụ. Video gụgharia na-mere na o kwere omume, tinyere nnweta DVD authoring menus.
Mkpa encode MP4 faịlụ na-ebilite mgbe òtù ma ọ bụ ọrụ na-achọ bulite vidiyo na-ekere òkè portals ikwe iche iche na ngwaọrụ na-egwu na faịlụ. MP4, ịbụ otu n'ime ndị ọtụtụ ebe ada formats maka ọdịyo na video aka na ijikọta ọtụtụ multimedia faịlụ n'ime otu zuru ezu usoro.
Otu MP4 encoder bụ a software omume na-ebu ụzọ amata video faịlụ site na ọtụtụ formats n'ime MP4, si otú ahụ jiri faịlụ dakọtara na ọtụtụ MP4 Player dị ka iPhone, PSP, Xbox 360, n'etiti ndị ọzọ. N'ihi na ndị na-achọ dezie ha MP4 faịlụ, ihe MP4 encoder abịa kemfe. Ya na ezi arụmọrụ encoder, MP4 faịlụ ngbanwe nwere ike nweta mfe.
Part1: Top 5 MP4 Encoders maka Windows
Part2: Top 5 MP4 Encoders N'ihi na Mac
Part3: Download Videos Free na Wondershare AllMyTube
Mmepụta: AviDemux e dere si ọkọ, na-eji koodu site n'aka ndị ọzọ na ọrụ ndị dị ka nke ọma. Ghara ịbụ a n'ihu-ọgwụgwụ MP4 Encoder, AviDemux bụ a standalone ngwa na fọrọ nke nta onwe ẹdude. E wezụga ọba akwụkwọ na ụgbọ mmiri na AviDemux, e nweghị dependencies. Isi mmepe nke AviDemux a rụrụ site Grunster mgbe anabata patches, nsụgharị, na ahụhụ akụkọ.
Tọghata N'ime 150 Formats gụnyere SWF / 4K / 3D
Akpaaka nke aga-eme nwere ike mere iji ọrụ kwụ n'ahịrị, oru, na ndị ọzọ dị ike ike
Na-akwado a dịgasị iche iche nke video formats
Kemgbe a kwuru encoder ruo ogologo oge na ahịa
2. Baka Encoder
Mmepụta: ọzọ onwe ẹdude encoder, ọ bụ a onwe ẹdude x264, x265, na NeroAAC frontend eji maka amị ikpeazụ kwado nke video ihe. Nwere ikike iji aka AviSynth scripts, video / audio enweghị mkpakọ, na video abịakọrọ na mbụ codecs. Ná mmalite na-arụ ọrụ n'elu site Syurara Gundan, ọ na-eji Ebe e si nweta na zoro si ọtụtụ mmepe na òtù.
Irè Unicode Nkwado
Okomoko nke a dị ọcha User Interface
Ogbe File nhazi na ọrụ kwụ n'ahịrị
Na-akwado 10-bit video ngbanwe
Ngbanwe usoro nwere ike kwụsịrị ma zuru ezu nkwado nile na-egbu osisi
Adịghị achọ echichi na ọtụtụ asụsụ dị
Download Baka Encoder
3. DivX HEVC Encoder
Mmepụta: Mepụtara DivX Labs, a encoder ga-ekwe ka ị encode HEVC iyi na na-ẹdude n'ime DivX Profaịlụ. Mgbe-emecha ngbanwe usoro, otu onye nwere ike-egwu video iji MKV Ngwá Ọrụ, nke a na-patched maka HEVC ma ọ bụ na-ahọrọ na-adịbeghị anya version nke MKV Ngwá Ọrụ. DivX 10 ọkpụkpọ ike ga-eji na-egwu itinye na koodu faịlụ na kọmputa gị.
Enye gị ohere encode HEVC / H.265 iyi na-n'ime DivX HEVC Profaịlụ.
Ọ bụ a iwu akara software
Akwado ndị na-temporal scalability nke DivX HEVC
Tinyere nkwado maka Windows 8 na 10, e nwere Linux Version kwa
Enwekwukwa ngbanwe ọsọ na arụmọrụ
Download DivX HEVC Encoder
Mmepụta: Kere Dan Cunningham, EncodeHD bụ ihe ngwa re-encode niile ụdị video faịlụ maka ojiji na anụ ụlọ gị na media Player ma ọ bụ elu ngwaọrụ. Ọ nwere mfe interface na ebelata nsogbu, na enweghị ime ka ị na-ala na àgwà, ọ ọnọde karịa ọsọ. Ọ na-akwado a dịgasị iche iche nke mmepụta ngwaọrụ-eme ka ọ otu n'ime ndị kasị chọọ video encoders maka Windows Operating System.
Na-eji a ole na ole na-emeghe isi ngwaọrụ.
Nwere nnọọ ezi interface, na-enye aka maka ndị na-amụta
A dịgasị iche iche nke formats akwado, ekpuchi anụ ụlọ na elu ngwaọrụ.
Na-achọ NET 2.0 Frameworks.
5. H.264 Encoder
Mmepụta: An-emeghe-isi iyi software omume, ọ na-eme na-abụ ụlọ ọrụ ọkọlọtọ maka video mkpakọ. Makwaara dị ka MPEG-4 Part 10, ọ bụ a nọchiri mbụ ụkpụrụ, ya bụ MPEG-2 na MPEG-4. Ọ na-emekarị na-eji mgbe faịlụ ndị na-itinye na koodu maka a elu-definition video mmepụta. AVC ụkpụrụ maka Advanced Video nzuzo, ma ọ bụ yiri ka H.264.
Ewe uru nke elu-ọsọ ibe, na-anapụta àgwà mmepụta na etiti size, nke bụ ugboro anọ ukwuu
Na-achọ otu-atọ nke mbụ bandwit.
Atọghata na-ebu ụzọ amata na mmepụta ịbụ ọkara size.
Na-enyere aka na-ere ọkụ HD fim jidesie a ot DVD
Download H.264 Encoder
Eji maka mfe nzacha, ngbanwe, na converting aga-eme.
Akpaaka nke aga-eme nwere ike mere iji ọrụ kwụ n'ahịrị, oru, na ndị ọzọ dị ike ike.
Na-akwado a dịgasị iche iche nke video formats.
2. breeki aka
Mmepụta: ọzọ na-emeghe-isi iyi software omume, mepụtara site na breeki aka otu, a encoder awade nhọrọ encode a video faịlụ site ọ bụla e nyere format ka chọrọ usoro. A multi-ikpo okwu encoder, ọ bụ oru oma, na mgbe nile upgrades iji kpochapụ chinchi na patches. Ọ na-agwa ndị ọrụ na-ekere òkè na-eme ka ọ ka mma, ka o otu n'ime ndị kasị Mmanu encoders N'ihi na Mac Operating System.
g A ọnụ ọgụgụ nke wuru na-ngwaọrụ presets
E nwere ọtụtụ akwado ọsọ ọsọ isi mmalite
Kwụ n'ahịrị elu multiple anọchi
Nhọrọ nke ndụ video preview
Mgbe nile àgwà ma ọ bụ nkezi bit-ọnụego ngbanwe
Download breeki aka
3. Encoder x264
Mmepụta: Kere Video LAN Organization, a na-abụghị uru ịmalite gụnyere nke ndị mmadụ n'otu n'otu na ndị ọkachamara na-achọ mma media ngwọta maka ọrụ gburugburu ụwa. Tọhapụrụ n'okpuru okwu nke GNPU GPL, o nwere ọtụtụ ihe onye ọrụ apụghị iru mgbe ọ na-abịa MAC Operating System. Na-agbanwe B-etiti pụrụ isi chọta, e nwekwara nnweta nke omenala quantization matrices.
Best na klas arụmọrụ, mkpakọ, na atụmatụ
Nwere ike encode karịa 4 1080p iyi na ozugbo.
Nwere ọtụtụ elu psychovisual optimizations
Atụmatụ maka dị iche iche na bara uru ngwa akwado
Ji telivishọn mgbasaozi n'ikuku na creators nke ọtụtụ online portals.
Download x264 Encoder
4. Encoder 'ffmpegX'
Mmepụta: The nyere encoder na-haziri karịsịa maka Mac OS X na enwekwukwa graphic ọrụ interface nke nwere ike na-arụ ọrụ karịa 20 dị ike Unix Open Source Video na Audio nhazi Ngwaọrụ na-agụnye 'ffmpeg', nke bụ 'hyper ngwa ngwa video na ọdịyo encoder' , 'mpeg2enc', nke bụ na-emeghe-isi iyi MPEG-2 encoder na multiplexer, na n'ikpeazụ, na 'mencoder', nke bụ MPEG-4 encoder.
Dobe na ikpuru nhọrọ na-eme ka ngbanwe ngwa ngwa
Na-agụ si a dịgasị iche iche nke input formats
Mmepụta site bụ na ọtụtụ formats dakọtara na iche iche na ngwaọrụ
Emepụta DVD na ndepụta okwu kwa tinyere ndị ọzọ nhọrọ
5. penguuin Encoder N'ihi na Mac
Mmepụta: ọzọ Graphic User Interface ngwa n'ihi na mencoder, penguuin Encoder MP4 na-eji encode nta ọ bụla video usoro MP4. The GUI nwere pụtara ìhè oyiyi Encoder PMP ma e wezụga 'muxer' mode maka iPod, iPhone, Apple TV, na PSP. Ọ bụ ihe na-emeghe-isi iyi software omume na nwere ọtụtụ ihe onye ọrụ isi n'etiti ndị ọrụ nke MAC Operating System.
Oru oma akakabarede ọsọ
Na-ewe ọsọ ọsọ si a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke formats
Mmepụta site na-akwado a ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ
Nwere ike encode fọrọ nke nta ọ bụla video format
Part3. Download Videos Free na Wondershare AllMyTube
Nkwado nbudata Videos si 1000+ video nkekọrịta weebụsaịtị, dị ka Vimeo, Dailymotion, wdg
Nkwado nbudata ọdịyo faịlụ na na Firefox, Chrome na ntụgharị.
Top 10 SWF ka MP4 Ntụgharị maka Fun!
Olee otú Play MP4 on Xbox Otu?
Olee otú iji tọghata AVCHD ka MP4 na Zero Ogo Loss
Top 10 MP4 Players maka Android
Top 3 YouTube Downloader Tinye-ons
WMV vs MP4, ọdịiche dị n'etiti WMV na MP4
> Resource> MP4> Olee encode MP4 Files na-MP4 Encoder